Wafti ay hogaaminayso wasiirka Haweenka dawladda federaalka oo booqasho ku timid Puntland, kana qaybgali doona shir looga hadlayo nabadda & joojinta gudniinka fircooniga. – Radio Daljir
Wafti ay hogaaminayso wasiirka Haweenka dawladda federaalka oo booqasho ku timid Puntland, kana qaybgali doona shir looga hadlayo nabadda & joojinta gudniinka fircooniga.
Garowe,Jan 09 -Shirwayne balaaran oo looga hadlayo gudniinka fircooniga ayna ka qaybgalayaan wasiirka haweenka dowladda faderaalka Soomaaliya iyo wasiirka haweenka Puntland ayaa maalinta barito ah la filayaa inuu ka furmo magaalada Garoowe.
Shirka oo socon doono mudo laba maalmood ah ayaa waxaa loo qabanayaa haween Soomaaliyeed oo kakala yimid gobolka dalka,waxaana diiradda lagu saarayaa joojinta gudniinka fircooniga ee gabdhaha.
Wasiirka haweenka dowladda Puntland Marwo Caasho Geelle Diiriye oo ka hadashay shir jara’id oo ay maanta xarunta wasaaradda haweenka Puntland si wadajir ah ugu qabteen wasiirka haweenka dowladda faderaalka ayaa waxaa labada wasiir ay sheegeen shirka maalinta bari furmi doona inay ka qaybgali doonaan haween ka kala yimid dalalka Kenya,Jabuuti,Ethiopia iyo qaar ka mid ah gobolada dalka Soomaaliya.
Maryan Aweys Jaamac oo ah wasiirada haweenka dawladda Soomaliya oo shirka ka qeyb galaysa ayaa sheegtay in shirka ay ka rajaynayso inuu noqdo mid wax weyn kusoo kordhin doona dadaalka haweenka.
Shirkaani ayaa waxaa la filayaa in looga hadlo geedi socodka nabadda iyo midka hugaamineed ee dalka iyo doorka haweenka Soomaaliyeed ay ka qaadan doonaan daminta colaadaha ka jira dalka Soomaaliya.